Zvinorevei Kuda Mwari Nemwoyo Wose? | Bhaibheri Rinodzidzisei?
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Ateso Aymara Bambara Baoule Basque Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabyle Kalenjin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mingrelian Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Rarotongan Romanian Rotuman Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Wolof Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ramba Uri Murudo rwaMwari
Kuda Mwari kunorevei?
Tingaramba sei tiri murudo rwaMwari?
Jehovha achapa sei mubayiro vaya vanoramba vari murudo rwake?
Uchaita kuti Jehovha ave nzvimbo yako yokupotera munguva dzino dzakaita semadutu here?
1, 2. Mazuva ano tingawana kupi nzvimbo yakachengeteka yokupotera?
FUNGIDZIRA uchifamba mumugwagwa pazuva rakunenge kuine dutu. Denga rinokwidibira. Mheni dzinotanga kupenya, kunova nemabhanan’ana, mvura yobva yatsvotsvoma. Unomhanya, uchitsvaka pokupotera. Pedyo nomugwagwa, unoona chivako chakasimba, mukati macho makaoma, uye makanaka chaizvo. Chokwadi unokoshesa nzvimbo yakachengeteka yakadaro!
2 Tiri kurarama munguva dzakaita semadutu. Mamiriro ezvinhu enyika ari kuramba achingoipa. Asi pane chivako chakachengeteka, nzvimbo yokupotera inogona kutichengetedza kuti tirege kukuvadzwa zvechigarire. Chivako chacho chii? Ona zvinodzidziswa neBhaibheri zvokuti: “Ndichati kuna Jehovha: ‘Ndimi nzvimbo yangu yokupotera nenhare yangu, Mwari wangu, wandinovimba naye.’”—Pisarema 91:2.
3. Tingaita sei kuti Jehovha ave nzvimbo yedu yokupotera?
3 Fungidzira izvozvo! Jehovha, Musiki uye Changamire wezvinhu zvose zvakasikwa, anogona kuva nzvimbo yedu yokupotera inodzivirira. Anogona kutichengetedza, nokuti ane simba kwazvo kupfuura chero ani zvake kana kuti chero chinhu chipi zvacho chingatirwisa. Kunyange kana tikakuvadzwa, Jehovha anogona kubvisa migumisiro yacho yose yakaipa. Tingaita sei kuti Jehovha ave nzvimbo yedu yokupotera? Tinofanira kuvimba naye. Uyezve, Shoko raMwari rinotikurudzira kuti: “Rambai muri murudo rwaMwari.” (Judha 21) Chokwadi, tinofanira kuramba tiri murudo rwaMwari, tichiramba takabatanidzwa norudo naBaba vedu vokudenga. Tikaita izvozvo tinogona kuva nechokwadi chokuti iye ndiye nzvimbo yedu yokupotera. Asi tingava sei vakabatana saizvozvo?
ZIVA RUDO RWAMWARI UYE ITA CHIMWE CHINHU
4, 5. Ndedzipi dzimwe nzira idzo Jehovha akatiratidza nadzo rudo?
4 Kuti tirambe tiri murudo rwaMwari, tinofanira kunzwisisa kuratidzwa kwatakaitwa rudo naJehovha. Funga nezvedzimwe dzidziso dzeBhaibheri dzawakadzidza uchibatsirwa nebhuku rino. SoMusiki, Jehovha akatipa nyika kuti ive musha wedu unofadza. Akaizadza nezvokudya zvakawanda uye mvura, zviwanikwa, mhuka dzinofadza kwazvo, uye nzvimbo dzokuona dzakanaka. SoMuridzi weBhaibheri, Mwari akatizivisa zita rake uye unhu hwake. Uyezve, Shoko rake rinozivisa kuti akatuma Mwanakomana wake anodiwa panyika, achibvumira Jesu kuti atambure ndokutifira. (Johani 3:16) Chipo ichocho chinorevei kwatiri? Chinotipa tariro yenguva yemberi inoshamisa.
5 Tariro yedu yenguva yemberi inobvawo pane chimwe chinhu chakaitwa naMwari. Jehovha akagadza hurumende yokudenga, Umambo hwaMesiya. Ihwo huchakurumidza kugumisa kutambura kwose uye huchaita kuti nyika ive paradhiso. Fungidzira izvozvo! Tinogona kugara imomo tiine rugare uye mufaro nokusingaperi. (Pisarema 37:29) Munguva ino, Mwari anotipa mazano okuti tingararama sei nenzira yakanakisisa iye zvino. Akatipawo chipo chomunyengetero, nzira yokukurukurirana naye takasununguka. Idzi dzinongova nzira shomanana idzo Jehovha akaratidza nadzo rudo kuvanhu vose zvavo uye kwauri somunhu oga.
6. Ungaiteiwo norudo rwawakaratidzwa naJehovha?
6 Mubvunzo unokosha wokuti ufunge nezvawo ndouyu: Ndichaita sei norudo rwandakaratidzwa naJehovha? Vakawanda vachati, “Ndinofanirawo kuda Jehovha.” Ndiwo manzwiro aunoita here? Jesu akataura kuti murayiro uyu ndiwo mukuru pane mimwe yose: “Ida Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose nepfungwa dzako dzose.” (Mateu 22:37) Chokwadi une zvikonzero zvakawanda nei uchifanira kuda Jehovha Mwari. Kuti zvinzi unoda Jehovha nomwoyo wako wose, mweya, uye pfungwa unofanira kungonzwa kuti ndizvo zvauri kuita here?
7. Kuti zvinzi unoda Mwari unofanira kungonzwa kuti unomuda chete here? Tsanangura.
7 Sezvinotsanangurwa muBhaibheri, kuda Mwari kunoreva zvinopfuura kungonzwa kuti unomuda. Kutaura chokwadi, kunyange zvazvo kunzwa kuti unoda Jehovha kuchikosha, kunzwa ikoko kunongova mavambo okumuda chaiko. Mhodzi yomuapuro inokosha pakuita kuti muti womuapuro unobereka zvibereko uvepo. Zvisinei, kudai waida apuro, waizogutsikana here kudai mumwe munhu aizongokupa mhodzi yomuapuro? Kana! Saizvozvowo, kunzwa uchida Jehovha Mwari kunongova mavambo. Bhaibheri rinodzidzisa kuti: “Kuda Mwari kunoreva izvi, kuti tichengete mirayiro yake; uye mirayiro yake hairemi.” (1 Johani 5:3) Kuti kuve kwechokwadi, kuda Mwari kunofanira kubereka zvibereko zvakanaka. Kunofanira kuratidzwa nezvatinoita.—Mateu 7:16-20.
8, 9. Tingaratidza sei rudo rwedu uye kuonga kwatinoita Mwari?
8 Tinoratidza kuda kwatinoita Mwari patinochengeta mirayiro yake uye patinoshandisa chokwadi chake chinokosha. Kuita izvozvo hakuna kunyanya kuoma. Panzvimbo pokuva inorema, mitemo yaJehovha yakaitirwa kuti itibatsire kurarama upenyu hwakanaka, hunofadza uye hunogutsa. (Isaya 48:17, 18) Patinorarama maererano nokutungamirira kwaJehovha, tinoratidza Baba vedu vokudenga kuti tinoonga zvechokwadi zvinhu zvose zvavakatiitira. Zvinosuruvarisa kuti mazuva ano vanhu vashomanana vari munyika vanoratidza kuonga kwakadaro. Isu hatidi kuva vanhu vasingaongi, sevamwe vanhu vakararama Jesu paaiva pasi pano. Jesu akaporesa vanhu gumi vaiva nemaperembudzi, asi mumwe chete ndiye akadzoka kuzomutenda. (Ruka 17:12-17) Chokwadi taizoda kuva souya mumwe chete aionga, kwete sevapfumbamwe vaisaonga!
9 Saka, mirayiro yaJehovha yatinofanira kuchengeta ndeipi? Takurukura inoverengeka yayo mubhuku rino, asi ngatidzokororei mishomanana. Kuchengeta mirayiro yaMwari kuchatibatsira kuramba tiri murudo rwaMwari.
10. Tsanangura kuti nei zvichikosha kuti urambe uchiwana zivo pamusoro paJehovha Mwari.
10 Kudzidza nezvaJehovha idanho rinokosha pakuswedera pedyo naye. Chinhu chinofanira kuramba chichiitwa. Kudai waiva panze usiku kuchitonhora chaizvo, uchidziya moto, waizorega moto wacho uchipera, wobva wadzima here? Kwete. Waizoramba uchiwedzera huni kuti moto wacho urambe uchibvira. Upenyu hwako hungava pangozi! Huni zvadzinoramba dzichiita kuti moto ubvire, saizvozvowo “zivo pamusoro paMwari” inoita kuti kuda kwedu Jehovha kurambe kwakasimba.—Zvirevo 2:1-5.
Kufanana nomoto, kuda kwako Jehovha kunoda huni kuti kurambe kwakasimba
11. Kudzidzisa kwaJesu kwakaitei pavateveri vake?
11 Jesu aida kuti vateveri vake varambe vachiita kuti kuda kwavo Jehovha neShoko rake rinokosha rechokwadi kurambe kwakasimba. Pashure pokunge amutswa, Jesu akadzidzisa vamwe vadzidzi vake vaviri nezvohumwe uprofita huri muMagwaro echiHebheru hwakazadzika paari. Zvakaguma nei? Gare gare ivo vakati: “Mwoyo yedu yanga isingatsvi here zvaanga achitaura nesu mumugwagwa, zvaanga achitivhurira kwazvo Magwaro?”—Ruka 24:32.
12, 13. (a) Pavanhu vazhinji varipo nhasi, chii chakaitika pakuda kwavo Mwari uye Bhaibheri? (b) Tingaitei kuti rudo rwedu rurege kutonhora?
12 Pawakatanga kudzidza zvinonyatsodzidziswa neBhaibheri, wakaona here kuti mwoyo wako wakatanga kupisa nomufaro, kushingaira, uye kuda Mwari? Hapana mubvunzo kuti wakadaro. Vakawanda vakanzwa saizvozvo. Dambudziko iye zvino nderokuti uchengete rudo rukuru irworwo rwakasimba uye kuita kuti rukure. Hatidi kutevera zvinoitwa nenyika mazuva ano. Jesu akafanotaura kuti: “Rudo rwevazhinji ruchatonhora.” (Mateu 24:12) Ungaita sei kuti kuda kwako Jehovha uye kuda chokwadi chiri muBhaibheri kurege kutonhora?
13 Ramba uchiwana zivo pamusoro paJehovha Mwari naJesu Kristu. (Johani 17:3) Fungisisa zvaunodzidza muShoko raMwari, uchizvibvunza kuti: ‘Izvi zvinondidzidzisei nezvaJehovha Mwari? Zvinondipa chimwe chikonzero chipi chokuti ndimude nomwoyo wangu wose, pfungwa, uye mweya?’ (1 Timoti 4:15) Kufungisisa kwakadaro kuchaita kuti kuda kwaunoita Jehovha kurambe kwakasimba.
14. Munyengetero ungatibatsira sei kuita kuti kuda kwatinoita Jehovha kurambe kwakasimba?
14 Imwe nzira yokuita kuti kuda kwaunoita Jehovha kurambe kwakasimba ndeyokugara uchinyengetera. (1 VaTesaronika 5:17) MuChitsauko 17 chebhuku rino, takadzidza kuti munyengetero chipo chinokosha chinobva kuna Mwari. Ukama hwevanhu zvahunokura nokugara vanhu vachikurukurirana vakasununguka, saizvozvowo ukama hwedu naJehovha hunogara hwakanaka uye hwakasimba patinogara tichinyengetera kwaari. Zvinokosha kuti tisamborega minyengetero yedu ichiva yokungoitawo—mashoko atinogara tichingodzokorora asina chaizvo zvaanoreva. Tinofanira kutaura naJehovha sezvinoita mwana nababa vanodiwa. Chokwadika, tinoda kutaura naye tichimuremekedza, asi takasununguka, nokutendeseka, uye zvichibva mumwoyo. (Pisarema 62:8) Chokwadi, kudzidza Bhaibheri uri woga uye kunyengetera zvichibva mumwoyo zvinhu zvinokosha pakunamata kwedu uye zvinotibatsira kuramba tiri murudo rwaMwari.
15, 16. Nei tingaona zvakakodzera basa rokuparidza Umambo seropafadzo uye pfuma?
15 Kudzidza Bhaibheri uri woga uye kunyengetera mabasa okunamata atingaita tiri toga. Zvisinei, zvino ngatikurukurei chikamu chokunamata kwatinoita pachena: kutaura nevamwe pamusoro pezvatinotenda. Wakatoudza vamwe here chokwadi cheBhaibheri? Kana wakadaro, wakava neropafadzo inoshamisa. (Ruka 1:74) Patinoudza vamwe chokwadi chatakadzidza nezvaJehovha Mwari, tinenge tichiita basa rinokosha zvikuru rakapiwa vaKristu vose vechokwadi—riya rokuparidza mashoko akanaka oUmambo hwaMwari.—Mateu 24:14; 28:19, 20.
16 Muapostora Pauro aiona ushumiri hwake sechinhu chinokosha, achihudana kuti pfuma. (2 VaKorinde 4:7) Kutaura nevanhu nezvaJehovha Mwari uye zvinangwa zvake ndiro basa rakanaka kwazvo raungaita. Iko kushumira Tenzi akanaka kwazvo, uye kunoita kuti tibatsirwe zvikuru. Nokuita basa iri, uri kubatsira vanhu vane mwoyo yakatendeseka kuti vaswedere pedyo naBaba vedu vokudenga uye kutanga kufamba mumugwagwa unoenda kuupenyu husingaperi! Pane rimwe basa here ringagutsa kudarika iri? Uyezve, kupupura nezvaJehovha neShoko rake kunowedzera kutenda kwako uye kunosimbisa kumuda kwaunoita. Uye Jehovha anokoshesa kushanda zvakaoma kwaunoita. (VaHebheru 6:10) Kuramba uchiita basa rakadai uchishingaira kunokubatsira kuramba uri murudo rwaMwari.—1 VaKorinde 15:58.
17. Nei ushumiri hwechiKristu huchifanira kukurumidza kuitwa mazuva ano?
17 Zvinokosha kuti tiyeuke kuti basa rokuparidza Umambo rinofanira kukurumidza kuitwa. Bhaibheri rinoti: ‘Paridza shoko, zviite nokukurumidza.’ (2 Timoti 4:2) Nei izvi zvichifanira kukurumidza kuitwa mazuva ano? Shoko raMwari rinotiudza kuti: “Zuva guru raJehovha rava pedyo. Rava pedyo, uye riri kukurumidza kwazvo.” (Zefaniya 1:14) Chokwadi, nguva iri kukurumidza kuuya Jehovha paachagumisa mamiriro ezvinhu ose aripo iye zvino. Vanhu vanofanira kunyeverwa! Vanofanira kuziva kuti iye zvino ndiyo nguva yokusarudza kuti Jehovha ave Changamire wavo. Mugumo ‘hauzononoki.’—Habhakuki 2:3.
18. Nei tichifanira kunamata Jehovha pachena takabatana nevaKristu vechokwadi?
18 Jehovha anoda kuti timunamate pachena takabatana nevaKristu vechokwadi. Ndokusaka Shoko rake richiti: “Ngatirangarirane kuti tikurudzirane kuva norudo nemabasa akanaka kwazvo, tisingaregi kuungana kwedu, setsika ine vamwe, asi tikurudzirane, kunyanya zvamunoona zuva richiswedera pedyo.” (VaHebheru 10:24, 25) Patinoungana nevamwe vatinonamata navo pamisangano yechiKristu, tinova nomukana unoshamisa wokurumbidza uye kunamata Mwari wedu anodiwa. Tinosimbisana uye tinokurudziranawo.
19. Tingasimbisa sei kubatanidzwa kwatinoitwa norudo muungano yechiKristu?
19 Sezvatinoshamwaridzana nevamwe vanamati vaJehovha, tinosimbisa kubatanidzwa kwatinoitwa norudo uye ushamwari muungano. Zvinokosha kuti titsvake zvakanaka mune vamwe, sezvo Jehovha achitsvaka zvakanaka matiri. Usatarisira kuti vamwe vaunonamata navo vave vakakwana. Yeuka kuti vose vari pazvidanho zvakasiyana-siyana zvokukura pakunamata uye kuti mumwe nomumwe wedu anokanganisa. (VaKorose 3:13) Tsvaka kuva noushamwari hwepedyo nevaya vanoda Jehovha zvakanyanya, uye uchaona uchikura pakunamata. Chokwadi, kunamata Jehovha pamwe chete nehama dzako nehanzvadzi dzechiKristu kuchakubatsira kuramba uri murudo rwaMwari. Jehovha anopa sei mubayiro vaya vanomunamata vakatendeka uye vanoramba vari murudo rwake?
VAVARIRA KUWANA “UPENYU CHAIHWO”
20, 21. “Upenyu chaihwo” chii, uye nei iyoyo iri tariro inoshamisa?
20 Jehovha anopa vashumiri vake vakatendeka mubayiro woupenyu, asi upenyu hwakaita sei? Iye zvino uri mupenyu zvechokwadi here? Vakawanda vedu taizoti mhinduro yacho iri pachena. Tinofema, tinodya, uye tinonwa. Chokwadi tinofanira kuva tiri vapenyu. Uye panguva dzatinenge tichifara chaizvo, tingatoti, “Chokwadi uhwu ndihwo hunonzi upenyu!” Zvisinei, Bhaibheri rinoratidza kuti mupfungwa inokosha, mazuva ano hapana munhu mupenyu zvechokwadi.
Jehovha anoda kuti uve no“upenyu chaihwo.” Uchava nahwo here?
21 Shoko raMwari rinotikurudzira kuti ‘tibatisise upenyu chaihwo.’ (1 Timoti 6:19) Mashoko iwayo anoratidza kuti “upenyu chaihwo” chinhu chatinotarisira kuwana munguva yemberi. Chokwadi, patinenge takwana, tinenge tava vapenyu mupfungwa izere yeshoko racho, nokuti tinenge tava kurarama seizvo Mwari aida pakutanga. Patinenge tichirarama muparadhiso pasi pano tiine utano hwakakwana, rugare, uye mufaro, pakupedzisira tichava no“upenyu chaihwo”—upenyu husingaperi. (1 Timoti 6:12) Iyoyo haisi tariro inoshamisa here?
22. ‘Ungabatisisa sei upenyu chaihwo’?
22 ‘Tingabatisisa sei upenyu chaihwo’? Mumashoko ari pamashure pacho, Pauro akakurudzira vaKristu “kuti vaite zvakanaka” uye “vapfume pamabasa akanaka.” (1 Timoti 6:18) Saka, zviri pachena kuti zvakawanda zvine chokuita nemashandisiro atinoita chokwadi chatakadzidza muBhaibheri. Asi Pauro aireva here kuti tinogona kuwana “upenyu chaihwo” nokungoita mabasa akanaka? Kwete, nokuti tarisiro dzinoshamisa dzakadaro zvechokwadi dzinobva pakuwana “mutsa usina kukodzera kuwanwa” waMwari. (VaRoma 5:15) Zvisinei, Jehovha anofarira kupa mubayiro vaya vanomushumira vakatendeka. Anoda kukuona uchirarama “upenyu chaihwo.” Upenyu husingaperi hwakadaro hunofadza, hune rugare huri mberi nokuda kwevaya vanoramba vari murudo rwaMwari.
23. Nei zvichikosha kuti tirambe tiri murudo rwaMwari?
23 Mumwe nomumwe wedu anofanira kuzvibvunza kuti, ‘Ndiri kunamata Mwari nenzira yaanoratidza muBhaibheri here?’ Kana tikava nechokwadi chokuti, zuva nezuva, mhinduro yacho ndihungu, saka tiri panzira yakarurama. Tinogona kuva nechokwadi chokuti Jehovha ndiye nzvimbo yedu yokupotera. Achachengeta vanhu vake vakatendeka vakachengeteka mumazuva okupedzisira ane nhamo emamiriro ezvinhu aripo iye zvino. Jehovha achatinunurawo, otipinza mumamiriro ezvinhu matsva anoshamisa ava pedyo. Chokwadi tichafara zvikuru kuva nenguva iyoyo! Uye tichafara kuti takaita zvisarudzo zvakarurama mumazuva ano okupedzisira! Kana ukaita zvisarudzo zvakadaro iye zvino, uchava no“upenyu chaihwo,” upenyu hwaidiwa naJehovha Mwari, nokusingagumi!
Tinoratidza kuti tinoda Mwari zvechokwadi nokuchengeta mirayiro yake uye kushandisa chokwadi chake chinokosha.—1 Johani 5:3.
Kudzidza Shoko raMwari, kunyengetera kuna Jehovha nomwoyo wose, kudzidzisa vamwe nezvake, uye kumunamata pamisangano yechiKristu zvichatibatsira kuramba tiri murudo rwaMwari.—Mateu 24:14; 28:19, 20; Johani 17:3; 1 VaTesaronika 5:17; VaHebheru 10:24, 25.
Vaya vanoramba vari murudo rwaMwari vane tariro yokuva no“upenyu chaihwo.”—1 Timoti 6:12, 19; Judha 21.